TAARIIKH: In Kooxda Everton Ay Iska Lahayd Garoonka Anfield, In Magaca Liverpool FC Ay Koox Kale Uga Horaysay Iyo 25 Xaqiiqo Oo Ay Suurtogal Tahay In Aanad Liverpool Ka Ogayn. | Laacib.net
TAARIIKH: In Kooxda Everton Ay Iska Lahayd Garoonka Anfield, In Magaca Liverpool FC Ay Koox Kale Uga Horaysay Iyo 25 Xaqiiqo Oo Ay Suurtogal Tahay In Aanad Liverpool Ka Ogayn.
February 17, 2019 Balaleti 11
1. Ma ahan Liverpool FC-dii ugu horeysay
Markii ugu horeysay la sameeyo koox lagu magacaabo Liverpool Football Club waxa ay aheyd sannadii 1857, waxaana ay ciyaarayeen kubad la mid ah tan Rugby loo yaqaano maanta.
Kooxdaas wax xiriir ah lama laheyn kooxda haatan loo yaqaano Liverpool FC, waxaana ay kooxdaas ku biirtay kooxda maanta loo yaqaano Liverpool St. Helens FC.
2. Anfield waxaa la lahaan jirtay kooxda ay xafiiltamaan ee Everton
Everton FC ayaa ku ciyaari jirtay garoonka Anfield laakiin waxa ay u wareegeen garoonka Goodison Park sannadii 1891 ka dib markii la isku qabsaday kirada garoonka.
Madaxweynihii kooxda ee markaas John Houlding ayaa is arkay isagoo ay ku soo wareegtay lahaanshaha xuquuqda garoonka Anfield Stadium iyadoo aysan jirin koox ku ciyaareysa.
3. Saameynta Scotland
Si uu u sameeyo Liverpool Football Club sannadii 1892, John Houlding waxa uu u baahnaa koox, waxaana uu aaday Scotland isagoo la soo saxiixday 13 ciyaartoy.
Xaqiiqdiina Liverpool kuma aysan guuleysan horyaal iyadoo uusan u ciyaareynin ciyaaryahan Scottish ah.
4. Mar walba casaan ma aheyn
Maaliyadii ugu horeysay ee kooxda ku ciyaari jirtay waxa ay aheyd buluug iyo cadaan, halka Everton ay ku ciyaari jirtay maaliyad casaan ah.
5. Sidoo kalena mar walba caan ma aheyn.
Inkastoo garoonkooda uu waagaas qaadi jiray 20 kun taageerayaal ah, hadana kaliya 100 taageerayaal ah ayaa soo xaadiray kulankii ugu horeysay ee Liverpool.
6. Guulo xilli hore ah ayay ka gaareen Football League
Kooxda waxa ay xubin ka noqotay Football League sannadii 1893, waxaana ay u soo dalacday horyaalka heerka koowaad ka dib hal xilli ciyaareed oo ay ku jirtay horyaalka heerka labaad.
Guulahooda waxa ay bilowdeen xilli hore iyagoo horyaalka ku guuleystay 1901, 1906, 1922 iyo 1923.
7. Waxay garaaceen cadowgooda
Xilli ciyaareedkii ugu horeysay ee ay Liverpool ka ciyaarto Football League waxa ay ku guuleysteen horyaalka heerka labaad iyadoo aan laga badinin, waxaana ay 2-0 ku garaaceen kooxda Newton Heath oo maanta loo yaqaano Manchester United.
8. Markii ugu horeysay ee casaan xirtaan
Sannadii 1896 waxa ay aheyd markii ugu horeysay ee Liverpool ay xirato maaliyad casaan ah iyo buumo ama matante cadaan ah.
9. Taariikhda The Kop
Magaca loo yaqaano taageerayaasha Liverpool ee The Kop waxaa la sameeyay sannadii 1906 iyadoo loogu magacdaray dagaalkii Boer War oo ay ku dhinteen 300 nin oo intooda badan ka socday Liverpool.
10. Fadeexada qamaarka
Sannadii 1915kii kooxda waxa ay qeyb ka aheyd fadeexad qamaar taasoo keentay in afar ciyaartoy laga mamnuuco kubada cagta.
11. Guulaha sii socday
Kooxdii Bill Shankly waxa ay ku dhameysteen kaalinta 8aad markii ay ku soo laabtay horyaalka heerka koowaad, Liverpool kuma aysan dhameysanin meel intaas ka hooseysa tan iyo markaas.
12. Guulihii Bob Paisley
Bob Paisley waxa uu ku guuleystay 21 koob sagaal sannadood uu joogay kooxda taasoo ka dhigeysa tababarihii ugu guulaha badnaa taariikhda Liverpool.
13. Seddexdii koob ee ugu horeysay ee la isku qaado
Tababare Joe Fagan ayaa shaqada Liverpool la wareegay sannadii 1984 waxa uu ku guuleystay horyaalka, League Cup iyo European Cup oo maanta Champions League loo yaqaano, waa kooxdii Ingariis ee ugu horeysay ee seddexda koob isku qaada hal xilli ciyaareed.
14. Lacag ayay quuri jireen
Graeme Souness ayaa Dean Saunders ku soo iibsaday 2.9 milyan ginni, waxaana ay markaas aheyd rikoorka Britain ee suuqa kala iibsiga.
15. Dhaawac qariib ah
Michael Stensgaard ayaa la soo saxiixday Roy Evens kaasoo aan waligiis u ciyaarin kooxda koowaad, waxaana uu ku qasbanaaday inuu ciyaaraha ka fariisto ka dib markii uu isku dhaawacay miiska feerada xilli uu rabay inuu dhar feereysto.
16. Waxay ku qaaday 85 sannadood inay United ku garaacaan FA Cup.
Bishii Febraayo 2006 Liverpool waxa ay soo gabagabeysay 85 sannadood oo aysan Manchester United kaga badinin FA Cup iyadoo 1-0 ku garaacay kulankii Anfield, waxa ay aheyd guushoodii ugu horeysay ee tan iyo 1921.
17. Kooxda waxa ay heysataa guushii ugu weyneyd abid ee Champions League
Xilli ciyaareedkii 2007-08 Liverpool waxaa loo diiwaangeliyay guushii ugu weyneyd ee Champions League iyagoo 8-0 kaga badiyay Besiktas, waxaana rikoorkaas la haya Real Madrid.
18. Ciyaartii ugu horeysay ee goos-gooskeeda laga baahisay Match of the Day
22kii bishii Agoosto sannadii 1964 goos-gooska ciyaartii u dhaxeysay Liverpool iyo Arsenal ayaa aheyd tii ugu horeysay ee laga baahiyo barnaamijka BBC ee Match of the Day.
19. Ciyaartii ugu horeysay ee midab lagu daawado
Kulankii ay Liverpool la ciyaartay West Ham ayaa aheyd kulankii ugu horeysay ee iyadoo midab ah laga baahiyo Match of the Day 15kii November 1969 taasoo soo jiidatay 10 milyan oo daawadayaal ah.
20. Hobolada Pink Floyd ayaa taageera kooxda
Taageerayaasha Liverpool oo ku heesaya ‘You’ll Never Walk Alone’ ayaa ka soo dhex muuqatay heesta ay qaadaan hobolada Pink Floyd ee Fearless.
21. Robbie Fowler ayaa muddo dheer hayay rikoorka seddexleyda ugu dhakhsiyaha badneyd.
Waxa uu seddexleey ku dhaliyay 4 daqiiqo iyo 32 ilbiriqsi, waxa ay aheyd rikoor Premier League oo ay ka jabiyay Sadio Mane marki uu joogay Southampton isagoo haatan u dheela Liverpool.
22. Dalglish ayaa ahaa ninkii ugu horeeyay ee isku noqda ciyaaryahan iyo tababare
Markii Dalglish uu isku noqday tababaraha iyo xiddiga Liverpool sannadii 1985, waxa ay ka dhigtay qofkii ugu horeeyay ee talabadaas adag qaada.
23. Kooxda waxay aheyd tan ugu guulaha badan England tan iyo 2017
Kooxda ay cadowga isku yihiin ee Manchester United ayaa kala wareegtay rikoorkaas iyagoo noqday kooxda ugu guulaha badan England ka dib markii ay hanteen koobkii 42aad.
24. Waa kooxda seddexaad ee ugu guulaha badan Champions League
Marka lagu daro Bayren Munich iyo Barcelona, Liverpool ayaa ah kooxda seddexaad ee ugu guulaha badan Yurub iyagoo hantay 5 European Cups.
25. Ma aysan wada xiran casaan ilaa iyo 1964
Tababare Bill Shankly ayaa ahaa qofkii go’aansaday in Liverpool ay iska bedesho buumaha cadaanka ah oo ay ku ciyaarto maaliyad iyo buumo casaan ah.
Haddii aad dooneysid inaan xog ku saabsan kooxaha Yurub oo sidaan oo kale ah idiin soo uruurino, inoogu sheeg qeybta hoose ee fekradaha islamarkaana la wadaag warbixintaan asxaabtaada adigoo isticmaalaya button-da hoose ee Facebook iyo Twitter.
Sidoo kale Akhriso: Inuu Chelsea Tijaabo U Maray, Asalkiisa Cameroon & Algeria & 4 Sheey Oo Xiiso Leh Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Kylian Mbappe
Waad mahadsantihiin waan u baahanahay taariikhdan waxaad kasoo qaadataan barnaamijka xiga taariikhda chelsea
Man united Soo ururi xogteeda
Mar hadaad Liverpool sheegteen ciyaal hafalkooda ha dhagaysanina ee iska nasta.
Viva man United taageerayaasha Chelsea waxaa u sheegaa in aadan taariiq dheer laheen ilaa 2004kii
Liverpool wax kataariiq badan in ay jiraan u maleyn maayo England gudaheeda
LIVERPOOL LEE KU CIL CILIYA MAR WALBLO NAGADAA TEAM kle ah
Anuu hadalka wan idiin dhameeyay Mar hadaad taariikhdii boqorada(Liverpool) sheegteen Uma baahnidina inaad ka sheekaysaan kooxaha Yar Yar sida Chelsea man United city arsenal(allow dhidid) markaa iska nasta maxa ini wareerinaya. Kooxo aan taariikh fcn lahayn maxa inigu daalinaya. Hadaad rabtaan inaad Soo qortaana Swansea iyo hull city kuwaa ka sheekeeya
Markaad taariikh ururinaysid soo baadh marka hore wax walba hayska qorinee kulahaa real iyo munich uun baa ka badan Ac milan miyaanay 7 koob oo chapion ah haysan
Soo jiidh says:
Waa ku mahadsantihiin
Musa ibnu says:
Kooxo kale taariikhdooda ayaan ididna sugeynaa
Wadkumahad santihin wansugayna inay premier league qaato